အဟောင်းတွေဂိမ်းယခုအချိန်အထိကစားနေကြသည်: အပိုင်း 2
ယခင်အနှစ် 20 အံ့သြဖွယ်စီမံကိန်းများအပါအဝင်ဆောင်းပါး, ဖြည့်ဖို့ဒီဇိုင်းယခုတိုင်အောင်ကစားကြသည်ဟောင်းဂိမ်းစုဆောင်းခြင်း၏ဒုတိယအပိုင်း။ အသစ်တဆယ်ဒဏ္ဍာရီသေနတ်သမား, မဟာဗျူဟာနှင့် RPG ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာနေဆဲသူတို့ရဲ့အမျိုးအစားအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်များအကြားစဉ်းစားနေကြသည်။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေဟာ high-tech ခေတ်သစ် counterparts တွေကို၏တည်ရှိမှုရှိနေသော်လည်းဂိမ်းကစားများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ကြသည်။
မင်္ဂလာပါ ဂိမ်းများ ... ဒီအရာအဘို့များစွာသောအသုံးပြုသူများလူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့ပ်ကိုဝယ်ကြလော့။ သူတို့မကစားခဲ့ပါလျှင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် PC ကိုနိုင်အောင်ပေါ်ပြူလာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောသည်မှန်လျှင်, ဂိမ်းအချို့မျိုးဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ဒါပေါ်မှာမော်ဒယ် drawing, programming ကို၏လယ်ပြင်တွင်အထူးအသိပညာရှိသည်ဖို့လိုအပ်သောခဲ့၏။
ဖီဖာ 19 - ဂိမ်းကစားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း mode နဲ့စွဲလမ်းအွန်လိုင်းတိုက်ပွဲများ Ultimate Team မှကျေးဇူးတင်စကားစောင့်ရှောက်သောလူကြိုက်အများဆုံးအားကစား Simulator ကို။ 2018 ကစားသမား၏အဆုံးအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောဖော်မြူလာသုံးပြီးက virtual နယ်ပယ်များတွင်တိုက်ပွဲတွေလည်းသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာသုံးစွဲခဲ့ရသည်။ သို့သော်ဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်းရာထူး၏တစ်ဦးချင်းစီမှာအချို့ကစားသမားများယူတဲ့သဘောထားကိုရှိ၏။
အဘယ်သူမျှမ steam_api.dll (« steam_api.dll သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေပျောက်နေ ... ») ။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
နေ့သည်ကောင်းသော။ ငါအများကြီးဂိမ်းကစား (သင်တူသောစိတ်ကလူကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကွန်ယက်ပေါ်မှာကစားရန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသောဂိမ်းရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့) program ကိုရေနွေးငွေ့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်ထင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးငါ steam_api.dll ဖိုင်၏မရှိခြင်း (အမှားတစ်ခုပုံမှန်မျိုးနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းကိုတဦးတည်းလူကြိုက်များအမှားပုံထဲမှာပြသသွားပါမည်။
2018 အတွက်အကောင်းဆုံး multiplayer ဂိမ်းဆယ်ပါး
အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်သူမျှမတုထောက်လှမ်းရေးခဲ့ပုံကိုလိမ္မာပါးနပ်လိမ္မာ, စစ်မှန်သောလူတို့နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်အမြဲစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောကစားသမားကမ်ပိန်း၏ကျမ်းပိုဒ်ပြီးနောက်ကစားသမားလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်ဒါကြောင့်တချို့ကခေတ်ပေါ်အွန်လိုင်း Modes သာအားဖြင့်သွေးဂိမ်းများ, နှင့်အခြားသူများ, multiplayer ထောက်ခံပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောတဆယ်နှစ်လုံးကိုလအတွင်းကျော်, ယခုနှစ် 2018 multiplayer ဂိမ်းထဲမှာထိပ်ဆုံးတစ်ဆယ်ရှိကြ၏အထင်ရှားဆုံးအရာများစွာကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စီမံကိန်းများ, ရှိခဲ့သည်။
PS4 မှာ 2019 ခုနှစ်၏အများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းဆယ်ပါး
လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းပလက်ဖောင်း PlayStation4တစ်ခုမှာ multiplatform နှင့်သီးသန့်စီမံကိန်းများကဲ့သို့သောအရပျရှိအရာတို့တွင်အမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းကို Premier ၏သစ်ကို 2019 ခုနှစ်စီးရီး, ခန့်မှန်းထားသည်။ က PS4 အပေါ်ထိပ်တဆယ်အများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းများကို Sony ရဲ့ consoles စ၏ပရိသတ်များအဘို့ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုအမျိုးအစားအများဆုံးမှာပါတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များပြသထားတယ်။
တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပုံပြင်နှင့်အတူဂိမ်း Play အများအပြားချစ်မြတ်နိုးသည်။ ယနေ့တွင်ကြီးမားတဲ့ကျော်ကြားမှုထိပ်ဆုံး 10 အဆင့်သို့ပေါင်းစည်းခဲ့သည်ကိုအကောင်းဆုံးအရာ၏ရေနွေးငွေ့အတွက်အခမဲ့ဂိမ်းသို့ရောက်ကြ၏။ ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံအဖွဲ့ခံတပ်2Dota အတွင်းထာဝစဉ်ဂြိုလ်သား swarm အဘယ်သူမျှမပို ROOM တွင်သင်သည်ပြောင်းလဲနေသော PvP-တိုက်ပွဲများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်ဂိမ်းထဲမှာ2Warframe စစ်ပွဲမိုးကြိုး APB Reloaded Exile TrackMania နိုင်ငံများအသင်း APB Reloaded Gotham City, အယောင်ဆောင် Path ကို၏အကြောင်းအရာ, ရှင်သန်မှုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ရန်ပွဲအမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူယုံကြည်ကိုးစားမှုဝင်ငွေ ။
ရရှိနိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဝယ်ယူမှု: အွန်လိုင်းဂိမ်းသမိုင်းမှာ 10 စျေးအကြီးဆုံးအရောင်းအ
အွန်လိုင်းဂိမ်းဂိမ်း၏ရှည်လျားသောနာရီအသုံးပြုသူများအ captivate, နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ဒြပ်စင်နည်းပြကျွမ်းကျင်မှုစေသည်နှင့်အခြားသောကျော်က၎င်း၏သာလွန်သက်သေပြ။ တခါတရံမှာကစားသမားတစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် PvP ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်, အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လိုသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဒီဂိမ်းရဲ့ကြည့်မူရင်းဖြစ်ပါသည်သာမရှိတော့ဘယ်သူ့ကိုမှသောလက်နက်များသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်မူထူးခြားတဲ့အမြင်ရှိသည်။
အသေးစိတ်အတွက် Ubisoft စတူဒီယိုဂိမ်းများအတွက်စနစ်လိုအပ်ချက်များကိုအဆိုပါဌာနခွဲ 2. အဆိုပါ developer များ 30 ကျော် FPS နဲ့ 60 မှာ 1080p မှာဂိမ်းအဘို့အစိတျအပိုငျးမြား၏အမည်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအဖြစ် 1440p နှင့် 4K-resolution ကိုအနည်းဆုံး 60 FPS အတွက်ဂိမ်းအဘို့အရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးဂိမ်းကစားမှာ Windows7နှင့်အသစ်များသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးသင့်လျော်သော Processor ကို AMD ၏ FX-6350 သို့မဟုတ် Core i5-2500k အဖြစ် Full HD ကိုရုပ်ပုံမှာအသက် 30 ယူနစ်အတွက်ကြိမ်နှုန်းသည်။
DirectX ကိုငါ installed ဗားရှင်းဆုံးဖြတ်ရန်ဘူးဘယ်လို 9.0c, 10, 11, DirectX ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
လူအပေါင်းတို့အားမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏။ ဖြစ်ကောင်းလူအတော်များများ, အထူးသဖြင့်ဂိမ်းကစား, DirectX ကိုအတိုင်းဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းကိုကြား၏။ စကားမစပ်ကြောင့်မကြာခဏဂိမ်းနှင့်အတူကို bundle လာဂိမ်းသူ့ဟာသူ၏ installation ပြီးနောက်, DirectX ကို၏ဗားရှင်း update လုပ်ဖို့အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါ DirectX ကိုနှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးမကြာခဏမေးလေ့မေးမေးခွန်းတွေအပေါ်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်။
တစ်ပတ် 19 တင်ဆက် XXIII ဖီဖာအဖွဲ့
EA ၏စတူဒီယိုထဲကနေ developer များဖီဖာ 19 ထိုရက်သတ္တပတ်၏ XXIII ကစားသမားအဖွဲ့သည်ပေးအပ်သည်။ အထဲတွင်ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်၏သူရဲကောင်းများဖြစ်ကြသည်ပြည်တွင်းချန်ပီယံပွဲစဉ်အတွက်အောင်ပွဲဖို့သူ့အဖွဲ့ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ခဲ့သည်။ မာတိကာရေးစပ်သီကုံး XXIII ရေးအဖွဲ့အချိန်ဖီဖာ 19 ဂိုးသမားဗဟိုနောက်ခံလူတစ်ပတ် 19 လက်ဝဲလက်ယာ Lateral Lateral ဗဟိုကွင်းလယ်လက်ဝဲတောင်ပံကစားသမားညာတောင်ပံကစားသမားရှေ့သို့ခုံတန်းလျားရေးစပ်သီကုံး XXIII ဖီဖာအဖွဲ့ - တံခါးဝရက်နေ့တွင်ဂိုးသမားတစ်ပတ်ဇန်နဝါရီ Oblak ၏အသင်းဖြစ်ပါတယ်။
Xbox One မှာအပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်း 2018 ခုနှစ်သက်သက်သာငြိမ်းချမ်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့အသုံးပြုသူများပင်လယ်ဓားပြဘဏ္ဍာကို၏ search အတွက်ရှည်လျားသောခရီးသှားဖို့ဖြစ်လာရဲအရာရှိရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုကိစ္စ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်လက်ထောက်အဖြစ်ငုပ်ခွင့်ပြု - ခဏသာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးသောသူသည်ရိုးရှင်းသောလယ်သမားဖြစ်လာရန်, ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ရောင်း။
နိုဝင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်မျှော်လင့်ချက်များ: Xbox Live ရွှေမှာယူသူများအတွက်အခမဲ့ဂိမ်း
Paid subscription ကို Xbox Live ရွှေ gamers တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အားသာချက်များ၏တစ်ဖွဲ့လုံးအစုံရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်နှင့်, ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံး - သင်တစ်ဦးလျောက်ပတ်သောငွေပမာဏကိုကယ်တင်နိုင်သည့်မှတစ်ဆင့်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ဂိမ်းများကိုတစ်ဦးသည်လစဉ်ထား။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒီလနိုဝင်ဘာ 2018 ခုနှစ်တွင် Xbox Live ရွှေအခမဲ့ဂိမ်း၏ပျော်ရွှင်ပိုင်ရှင်တွေ 4246 ရူဘယ်ကယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
လူကြိုက်များသည့်ပုံမှန်အိမ်ရှင်မကြားတွင်5ကစားဒေသများ,
ဒါဟာဒါကြောင့်ပုံမှန်ကွန်ပျူတာကစားသမားများ၏ပုံရိပ်ကိုပိုပြီးလေ့အဆက်မပြတ်သူက virtual Arcade, မဟာဗျူဟာနှင့်အွန်လိုင်း RPG အပေါ်သုံးစွဲရသောအခမဲ့အချိန်သမုဒ္ဒရာနှင့်အတူနေအိမ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့မဟုတ်လုလင်ကိုကပ်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ သို့သော်ဤကွန်ပျူတာဂိမ်းကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးဆွဲဆောင်ကြသည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ငါတိုင်းဂိမ်း (အနည်းဆုံးတောင်မှနည်းနည်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ) ဘာ FPS (တစ်စက္ကန့်ဘောင်) ကိုသိကြောင်းဆိုပါစို့။ အဆိုပါဂိမ်းထဲမှာဘရိတ်နှငျ့ရငျဆိုငျကြသူအနည်းဆုံးအဲဒီ - သူတို့သေချာဘို့အသိရကြ! ဒါကြောင့်သူကအဘယ်ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်, ဖြစ်ရှိပါတယ်, ဒါမူတည်သည့် FPS, တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်ဖြစ်သကဲ့သို့ဤဆောင်းပါး၌, ငါသည် (ဤညွှန်ပြချက်ကိုရည်မှတ်လူကြိုက်အများဆုံးမေးခွန်းများကိုမြင်ချင်တာပေါ့။
2018 အတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းက high-quality နဲ့တော်လှန်ရေးသမားစီမံကိန်းများကိုတွေအများကြီးကိုပေး၏။ သို့သော်အလားအလာဂိမ်းအကြားလုံလောက်စွာဂိမ်းကစားကျေနပ်နိုင်မသောသူတို့ကိုအရှိကြ၏။ ဝေဖန်မှုများနှင့်ဒေါသထွက်နေတဲ့တုံ့ပြန်မှုများ၏တရစပ်များစွာသောသွန်းလောင်းသဖြင့်, developer များဟာသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံဖို့တဟုန်တည်းပြေးပါပြီ။
နိုဝင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်အများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းဆယ်ပါး
Developer များ store မှာဆောင်းဦးရာသီ၏နောက်ဆုံးလ၌များစွာသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာတို့ကိုရှိသည်။ နိုဝင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်အများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းတွေထဲမှာအရေးယူဂိမ်းများနှင့် shooters နှင့်ရေး Simulator နှင့်စွန့်စားမှုရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဂိမ်းကစားသည့်အလွကမ္ဘာနှင့်အခြားကာလ၌, ဝေးလံတဲ့ဂြိုလ်မှပြောင်းရွှေ့လာသောအတူ။ နိုဝင်ဘာလ 2018 အတွက်ထိပ်တန်း 10 ဦးအများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းများ၏ content Battlefield V ကိုထပ်မံကျ 76 Hitman2Overkill ၏ The Walking Dead Darksiders III ကို Ascend Spyro Reignited Trilogy 11-11 အဆိုပါတိတ်ဆိတ်မှုက Man စိုက်ပျိုးရေး Simulator 19 Underworld: နိုဝင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်အမှတ်တရများ Retold ထိပ်တန်း 10 ဦးအများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောကစားပွဲ၏အချို့ ကျနော်တို့ပြီးသားပေါ်ထွက်လာပါပြီ။
EA ၏ကုမ္ပဏီသင်္ကေတအဖွဲ့နှင့်မြှင့်တင်ရန် Ultimate Team ကဒ်စစ်အစိုးရအတွက်နေရာတစ်နေရာရကိုမှန်ကန်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့သက်သေပြခဲ့သူ Simulator ကိုဖီဖာ 19. ကစားသမားအတွက် XX အဖွဲ့သည်တပတ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဘယ်သူသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိပ်တန်း 11 hit နှင့်ခုံတန်းရှည်ဖို့ဒီအချိန်သို့ သွား. အဘယျသို့နည်း ထိုရက်သတ္တပတ်၏အသင်းအတွက်ဂိုးသမားဂိုးသမားအနေအထား Nice အာဂျင်တီးနား Walter ဟာဘင်နီတက်ဇ် goalkeeper ကြာ - ထိပ်တန်းကစားသမား XX အဖွဲ့ဖီဖာ 19 ဂိုးသမားဗဟိုနောက်ခံလူလက်ဝဲလက်ယာ Lateral Lateral ဗဟိုကွင်းလယ်လူလက်ဝဲတောင်ပံကစားသမားညာတောင်ပံကစားသမားရှေ့သို့အဖွဲ့ဖီဖာ 19 ထိပ်တန်းကစားသမား XX ၏မာတိကာ။